देश Archives - Page 1526 of 1546 - Deshko News Deshko News देश Archives - Page 1526 of 1546 - Deshko News
को-को डिभि पिआरवाला सरकारी कर्मचारीले राजिनामा दिए ? (हेर्नुहोस् विवरण)
काठमाडौ, साउन २४ सरकारी जागिर वा विदेशको डीभी पीआरमध्ये एक रोज्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएपछि सरकारी जागिर छोड्ने क्रम सुरु भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, साउन १०
दुई हजारभन्दा बढी युवतीको उद्धार
लुम्बिनी (रुपन्देही), साउन २४ मानव बेचबिखनविरुद्धका क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको थ्री एन्जल्स नेपालले उद्धार, रोकथाम र पुनःस्थापनाका माध्यमबाट आव २०७१/०७२ मा दुई हजार ५९८ जनाको उद्धार गरेको छ । थ्री एन्जल्सले
प्रहरी र सशस्त्रबिच कुटाकुट
पर्वत, साउन २४ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच शनिबार साँझ पर्वत सदरमुकाम कुश्मामा कुटाकुट हुँदा दुवैतर्फ केही घाइते भएका छन्। बिदा मनाउन मदिरा सेवन गरेर नेपालकै अग्लो कुश्मा–कैया झोलुंगे पुल घुम्न
काठमाडौं, साउन २४ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले तीन जिल्ला टुक्र्याएर सीमांकन गरेका छन्। टुक्रिएका जिल्लाहरुमा रुकुम, बागलुङ र नवलपरासी छन्। प्रदेश ४ मा बागलुङको पूर्वी भाग र नवलपरासीको (बर्दघाट
मध्यरातमा के-के बुँदामा सहमति सहित हस्ताक्षर भयो ? (पूर्ण पाठसहित)
काठमाडाैं, साउन २४ चार दलका शीर्ष नेताबीच मध्यरात सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबारमा जारी दिनभरको बैठकपछि सुल्झन नसकेका केही विवादलाई थाँति राख्दै सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो। दलहरुबीच सहमतिमा हस्ताक्षर
अाज वि.सं. २०७२ साल साउन २४ गते आइतबार। इश्वी सन् २०१५ अगस्ट ९ तारिख। शकसंवत् १९३७। कीलक संवत्सर। दक्षिणायन। वर्षा ऋतु। नेपाल संवत् ११३५ दिल्लागा। मेष – चु, चे, चो,
अब यस्तो बन्ने भयो संघीय नेपाल (कुन प्रदेशमा कुन जिल्ला सबै विवरण सहित)
काठमाडौं, साउन २३ दलहरुले गरेको ६ प्रदेशको सीमांकनमा बाग्लुङ र नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएको छ । प्रदेशहरुको नाम राखिएको छैन । यो प्रदेश सभाले नै राख्नेछ । दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार ताप्लेजुङ,
सीमांकनसहित ६ प्रदेशमा सहमति
काठमाडौं, साउन २३ प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच सीमाकंनसहित ६ प्रदेश बनाउने विषयमा सहमति भएको छ । प्रमुख चार दलबीच भएको शनिबार दिनभर भएको छलफलबाट ६ प्रदेशको सीमांकनका विषयमा टुंगो लागेको
एक सय ४२ डीएसपीको सरुवा (को-कहाँ पुगे सबै सुचिसहित)
भोजपुर, साउन २३ नेपाल प्रहरीले १४२ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को सरुवा गरेको छ । भोजपुुरका डीएसपी बासुदेव खतिवडाको प्रहरी केन्द्रिय कार्यालको श्रब्यदृश्य शाखामा सरुवा भएको छ भने भोजपुरमा अन्चल
कुन प्रदेशमा कुन जिल्ला ?
काठमाडौं, साउन २३ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीयतामा जाँदा ८ प्रदेश हुने उल्लेख छ । तर धेरै नागरिकले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै प्रदेश बनाउन उपयुक्त नहुने भन्दै प्रदेशको संख्या